Nagu saabsan - Guangzhou Jinfuya Cosmetics Co., Ltd.
Guangzhou Jinfuya Cosmetics Co., Ltd, waa soo saare xirfadle ah oo ku sugan Shiinaha oo waayo-aragnimo sannado badan u leh is-qurxinta OEM iyo ODM iyo ganacsiga caalamiga ah, Waxay ku taal Li wan Plaza, Guangzhou, Shiinaha. Laga soo bilaabo 2018, waxaan dhisnay adeeg is-qurxin hal-joogsi oo dhameystiran, oo ay ku jiraan bixinta adeegyo OEM ODM, qaabeynta horumarinta, la-tashiga suuq-geynta la-tashiga sumcadda si ay gacan uga geysato caadada si fudud u lahaanshaha iyo u shaqeynta magacyadooda. Waxaan marwalba raacnaa qiimaha tayada marka hore, iskaashiga guusha-guuleysiga oo ah furaheena guusha shirkadda.
Alaabtayadu inta badan oo ay ku jiraan hooska indhaha, aasaaska, lipsticks, dadka qarsada, blushes, Makeup Primer, budada wejiga, mascaras, eyeliners, buufinta dejinta, serumka koritaanka baalasha, daawooyinka lagu buufiyo timaha iyo waxyaabaha kale ee la isku qurxiyo iyo daryeelka maqaarka.
Aqoon Isweydaarsi Wax soosaar
Waxaan leenahay warshad casri ah oo daboolaysa aag 20000 mitir murabac ah oo leh tas-hiilaad casri ah, Aqoon isweydaarsigayaga wax soosaarka waxaa loo qaabeeyey loona dhisay si waafaqsan heerarka GMPC. Waxaan leenahay Qolka nadiifka ah ee otomaatiga ah ee Fasalka 100,000 oo nadiif ah oo loogu talagalay waxyaabaha isku qurxinta ee isku dhafan iyo buuxinta waxaana jira Nidaamka Xakamaynta Wax-soo-saarka Sirdoonka. Aqoon isweydaarsigayaga wax soosaarka waxaa lagu qalabeeyaa nidaamyo hawo qaboojiye dhexe oo casri ah iyo qalab tijaabo iyo kormeer ah oo la soo Dejiyo Waxaan leenahay heerar heer caalami ah oo shaqeynaya, wax soo saar kasta waxaa lagu raad raaci karaa nidaamka si loo damaanad qaado xasiloonida iyo badbaadada sheyga.
15 khadadka wax soo saarka oo leh habeyn dabacsan si loo hubiyo waqtiga dhalmada. Kooxdayada xirfadleyda ah oo ay ku jiraan naqshadeynta garaafka, Baakadaha Logo, iibka waxaa loo dhisay si ay macaamiisha u siiso adeegga OEM iyo ODM oo ay ku jiraan adeegga calaamadeynta gaarka loo leeyahay, adeegga daabacaadda astaanta gaarka ah iyo adeegga saadka. Iyo sidoo kale adeegga suuqgeynta suuqgeynta.
Dhammaan alaabooyinkeennu waxay u hoggaansamaan heerarka tayada caalamiga ah waxaana si weyn loogu qiimeeyaa suuqyo kala duwan oo adduunka oo dhan ah oo ay ku jiraan USA, South America, Canada, UK, Germany, France, Netherlands, Russia, Japan, Australia, Vietnam, Philippines, iyo kuwa kale in kabadan 50 wadan.
Waxaan si diirran u soo dhawaynaynaa amarrada tijaabada yar ee lamaanaha cusub waxaanna rajeynaynaa inaan xiriir ganacsi oo guuleysta la yeelano dadka adduunka ku nool isla markaana aan isla korno mustaqbalka dhow.